FAQ - Vakok Online Gaming Community!
Vakok Online Games
How To Connect? Download Game!
Top Honourable Kill List
1. Vkpoint ဆိုတာဘာလဲ။
Vkpoint ဆိုတာ vakok service တွေဖြစ်တဲ့ Character transfer, Faction/Name/Race Change, အစရှိတာတွေ၊ vkShop, vkStore တွေမှာ ingame item တွေ ၀ယ်ယူရန်အတွက် အသုံးပြုတဲ့ Currency ဖြစ်ပါတယ်။
2. Vkpoint ကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
Vakok Top-Up Card(Payment Card) အား မိမိ account တွင်ထည့်သွင်းပါက VkPoint ရရှိပါမည်။ 3500 တန် တစ်ကဒ် ထည့်သွင်းလျှင် VkPoint - 3500 ရရှိပါမည်။ Vakok TopUp Card များကို အမြို့ အနယ်နယ်ရှိ Vakok Reseller Shop များ နှင့် သော်လည်းကောင်း Mpt bill ဖြင့်သော်လည်းကောင်း 24/7 ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
3. VkPoint နဲ့ ဘာတွေ လုပ်လို့ ရမလဲ ။
VkPoint နဲ့www.vakok.net/store , www.vakok.net/ashop တို့ က Item တွေကို ၀ယ်လို့ ရပါတယ်။
VkPoint ကို player အချင်းချင်း လွှဲပြောင်းပေးလို့ ရပါတယ် ( www.vakok.net/pointtransfer )
VkPoint နဲ့InGame Character များကို နာမည်ပြောင်းချင်း ၊ race change ခြင်းအစရှိသည်တို့ ကို ပြုလုပ်လို့ ရပါတယ်။
Vkpoint နဲ့ မိမိ Character ကို အခြား Account တစ်ခုထဲသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ (www.vakok.net/character_transfer)
4. Vkstore/Vkshop မှာ ဘာတွေ ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ။
Vakok Store တွင် Vakok မှ တည်ထောင်ပေးထားသော World of WarCraft Realm များသော WOTLK and CATA Realm များအတွက် InGame Mount များ ၊ Item များကို Vk Point , Vk Reward များဖြင့် ရောင်းချ ပေးလျှက်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။ Vakok Store တွင် ၀ယ်ယူ သော Item များအားလုံး ကို In Game Mail မှ ချက်ခြင်း ပို့ ဆောင်ပေးပါသည်။ အခုဝယ် အခု ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
www.vakok.net/store မှာ မိမိအလိုရှိရာ item ဘေးရှိ xxxxx vkpoint ကို နှိပ်ပြီး Add to cart ပြုလုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ check out button ကို နှိပ်ပြီး ထည့်မည့် character ကိုရွေးပါ။ Check out ထပ်နှိပ်လိုက်လျှင် in game mail မှ ချက်ချင်း ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Vkshop www.vakok.net/ashop တွင် fancy item များကို vkpoint နှင့် ရောင်းချပေးထားပါသည်။ vkshop တွင် Add cart ပြုလုပ်ပြီး လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ပါက 48 နာရီအတွင်း ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
5. မိမိအကောင့်ထဲရှိ Vkpoint ကို လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသလား။
လွှဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ vkpoint ကို player အချင်းချင်း www.vakok.net/pointtransfer မှ လွှဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ မိမိ လွှဲပြောင်းပေးလိုသည့်သူ၏ Username ကို Search လုပ်ပါ။ မိမိလွှဲပြောင်းမည့် Amount ကို ရွေးချယ်ပါ။ မိမိ Owner ID ကို ရိုက်ထည့်ပြီး လွှဲပြောင်းနိုင်ပါပြီ။
6. Character Tools က ဘာလုပ်လို့ရလဲ။
Character Tools( www.vakok.net/character_tools ) ဆိုသည်မှာ WOW ingame character များကို Name, Race, Faction, Model အစရှိသည်တို့ကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် Tools ဖြစ်ပါသည်။ Character Tools တွင် မိမိ ပြုလုပ်လိုသည့် Realm မှန်မမှန် စစ်ပါ။ Realm မှန်ပါက Name, Race, Function Change Service များကို vkpoint နှင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
မှတ်ချက်။ ။ Name Chane Service ကို အသုံးပြုပါက ingame Character ဘေးတွင် မည်သည့် chacter change sign မှ ပြမည်မဟုတ်ပဲ၊ in game တွင်းသို့ ၀င်ရောက်သည့်အခါမှသာ နာမည် ပြောင်းလဲရန် Box ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။
7. မိမိ WOW Account အတွင်းရှိ Character တစ်ကောင်တည်းကို တခြားသူဆီ ပို့ချင်တယ်။/ရောင်းချင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
မိမိ WOW Account မှ Character တစ်ကောင်ကို အခြား Account ဆီသို့ လွှဲပြောင်းလိုပါက Character Exchange Service (www.vakok.net/character_transfer ) ကို အသုံးပြုရပါမယ်။ Character Exchange Charge မှာ ( 1 Character per 5000 vkpoint) ဖြစ်ပါတယ်။ Character Exchange ပြုလုပ်ရန် မိမိ Account ၏ Owner ID လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ Character Exchange ပြုလုပ်ရတာတွင် လွှဲပြောင်းလိုသည့် Account Username မှားယွင်းပို့မိပါက မိမိတာဝန်သာဖြစ်ပြီး မည်သို့မျှ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
© Copyright 2010 - 2018 Vakok